Bafuna ukuthathela uBabes Wodumo izinyathelo zomthetho abaseMlazi | Eyethu News
Noon deadline looms for defiant Mugabe as Zimbabwe crisis deepens - 54 mins ago
Mugabe defies resignation expectations in TV speech – VIDEO - 56 mins ago
Bolt enlisted to improve “explosiveness” of Aussie running between the wickets - 59 mins ago
Bafuna ukuthathela uBabes Wodumo izinyathelo zomthetho abaseMlazi
“Bathi bajwayele ukuxhashazwa abaculi abadumile.”
UBabes Wodumo osolwa ngokuntshontsha ingoma ethi “Ngangingekho Ebusheni Bakho” Isithombe: Zama Mathonsi
ABACULI beHouse Kwaito abasafufusa baseMlazi bathembisa ukuthathela izinyathelo zomthetho uBongekile Simelane odume ngelika Babes Wodumo “ngokuntshontsha”ingoma yabo.
USiphiwe Manzi noS’manga Mhlongo abathi ingoma ethi eculwa nguBabes Wodumo ethi “Ngangingekho Ebusheni Bakho”ngeyabo.
Bathi sebeke bazama ukuxhumana noBabes Wodumo ezinkundleni zokuxhumana kodwa wavele wabathuka ebahlanganyela nosisi wakhe, maqede waba (blocker) ku-Facebook.
Baqhubeke ngokuthi iculo labo balikhipha ngonyaka ka2015 belibiza ngesihloko esithi: #24 kodwa kwabathusa kakhulu uma sebelizwa liculwa uBabes emsakazweni selishintshe indlela ababeliqophe ngayo kodwa amagama kuseyiwo.
“Sinobufakazi obuqanda ikhanda ukuthi iculo lethu leli, ngisho umsakazo iGagasi FM inayo idemo yethu futhi isike yadlala khona, nakaSAMRO saya kobhalisa ingoma yethu yize bengabuyelanga kuthina ngoba bathi bazobuyela emva kwezinyanga ezintathu okuyimanje sekuphele iminyaka emibili.”
“Lo mkhuba usujwayele ukwenzeka ukuthi abaculi abadumile basixhaphaze ngoba kuzolalelwa bona kakhulu kunathi, sikhathele kudlaliwe ngathi, sihlele ukumfaka enkantolo uBabes Wodumo,”kusho labaculi ngokufutheleka.
Baveze nokuthi le liculo umzala kaSmanga Mhlongo wake wabahambisela lona kuDj Sox owabaphendula ngokuthi uzolilalela bese ebuyela kubona okungenzekanga lokho, kodwa nguye uDj Sox odidiyele elikaBabes Wodumo.
“Iculo likaBabes elangonyaka odlule ngoDisemba kanti iculo lethu salikhipha ngonyaka ka2015,”kuphetha laba baculi.
Ebuzwa ngalolu daba uBabes Wodumo uphike walala ngomhlane ukuthi untshontshe iculo.
“Sengikhathele abantu bethi ngintshontsha izingoma zabo ngisho no “Wololo”, “Amatsegetsege” kuthiwa ngawuntshontsha, engingakusho ukuthi laba abathi ngintshontshe ingoma yabo anginandaba abahambe beyongibopha ngeke balunge ngoba ayikho lento abayishoyo.”
“Lento ihlezi yenzeka uma sekuzoba nama-awadi abantu befuna ukudicilela phansi igama lami, ngiyababona babhorekile bafuna ukunakwa kanti mina anginaso isikhathi sabo.”kuchaza uBabes.
Utshele le liphephandaba ukuthi yena ubengumuntu ozithandela izindawo zobumnandi ( night clubs) uma ekulezi zindawo ubeke athathe amatemu angaleso sikhathi enze ingoma ngawo.
“Lengoma abathi ngiyitshontshile mina ngayikhipha ngo-2013 kudala kabi ngayibeka njengoba isiphume muva-nje futhi uma uqopha ingoma iyakhombisa ukuthi eyanini. Abantu bohlezi bekhuluma,” kuphetha uBabes Wodumo
Kulamule ezimbili izicisha mlilo kusha umuzi eHammarsdale